Dadang sigarantang: Dongeng Cinderella versi bahasa Malagasi
Indray andro, nisy tovovavy tsara tarehy iray atao hoe Cinderella. Izy Niara-nipetraka tamin'ny ratsy fanahy sy ny zanany roa renikely stepsisters. Dia nitondrany Cinderella tena ratsy ka tsy nankasitraka azy. Near avy any an-tranony, dia nisy tranon'ny mpanjaka izay tsara tarehy ary ho nanao fety lehibe. Ny renikely sy ny anabaviny nasaina hanatrika ny antoko. Na izany aza, dia tsy namela azy ho any amin'ny antoko. Izy no baiko mba manjaitra akanjo ny antoko izay mety ho hanaovana-dreniny sy anabavy. Raha, dia tsy manam-potoana manjaitra ny akanjo. Ny reniny sy ny anabavy nandeha tany amin'ny antoko sy ny sisa Cinderella irery ao an-trano.
Nahatsapa tena nalahelo izy ary nitomany. Teo anelanelan'ny ny ranomasony, tampoka ny Fairy godmother niseho ka nanao hoe: "Aza mitomany, Izaho maniraka anareo ho afaka amin'ny baolina izao!", Anefa izy, ary nitomany foana toa nalahelo be. Hoy izy hoe: "Tsy manana akanjo hanaovana amin'ny baolina". Ny Fairy godmother Mazava ho azy fa tsy manahy ka nahevahevany ny wand mba hanova ny Cinderella ny taloha akanjo ho any amin'ny akanjo vaovao, izay tena tsara tarehy. Ankoatra izany, dia Fairy godmother Cinderella nikasika ny tongony, ny wand sy tampoka Cinderella nanana kapany fitaratra tsara tarehy. Cinderella dia taitra ka nanao hoe: "Wow, misaotra anareo, fa ny fomba mety hankany amin'ny baolina?". Fairy godmother Dia niditra tao an-dakozia, ary nahita voalavo efatra. Dia nitodika azy ho volamena efatra soavaly sy ho tsara tarehy voatiry. Talohan'ny nandao an-trano, hoy ny Fairy Godmother "Cinderella, tsy maintsy mandeha an-trano tamin'ny misasakalina, satria mahagaga izany sitrapony ihany no miasa hatramin'ny misasakalina!"
Ary rehefa niditra tao an-dapa Cinderella, Gaga ny rehetra noho ny tsara tarehy tarehiny. Raha ny marina, tsy nisy nahafantatra azy izy, satria nisy izany samy hafa. Cinderella Tena tsara tarehy ny akanjo sy ny fitaratra kapany. Ny tsara tarehy koa lohan'ny nahita Cinderella ary raiki-pitia. Nihaona Cinderella ka nanontany hoe: "Moa ve ianao te-mandihy?" Ary hoy izy: "Eny, te-mandihy aminao". Prince sy Cinderella nandihy nandritra ny alina, ary tena faly izy tamin'izany alina. Izy nanadino ny Fairy godmother fampitandremana fa tokony hiditra an-trano ao amin'ny misasakalina. Tamin'ny fotoana farany, Cinderella nahatsiaro ny teny fikasana ho amin'ny Fairy godmother ka lasa an-trano. "Tsy maintsy mandeha!", Hoy izy. Nihazakazaka haingana izy ary iray amin'ireo ny fitaratra kapany sisa afa-tsy izy Tsy niverina mba haka azy io.
Cinderella tonga an-trano minitra vitsy taty aoriana. Rehefa tonga izy, ny famantaranandro namely tamin'ny roa ambin'ny folo lahy. Ny soavaly sy ny voatiry niverina ho any amin'ny teo aloha endrika ary tsy hanao ny fitaratra kapany sy ny akanjo tsara tarehy intsony. Ary rehefa afaka izany, ny renikely sy anabavy tonga tao an-trano, ary niresaka momba ny vehivavy tsara tarehy izay nandihy niaraka tamin'ny mpanjaka. Tena te hahalala izy ireo momba ny hoe iza ilay vehivavy izay niseho tampoka.
Tao an-dapa, Prince mieritreritra foana momba Cinderella ary raiki-pitia. Prince te hahita ny hoe iza ilay zazavavy, fa na dia tsy nahalala ny anarany. Prince dia ihany no nahita ny fitaratra slipper, ka dia hoy izy: "Izaho no hahita azy, ary Izaho kosa hanam-bady ny vehivavy, izay mifanaraka tongotra ho fitaratra izany slipper!".
Tamin'ny andro manaraka, ny mpanapaka sy ny mpiambina nankany an-trano rehetra ny efa misy. Te hahita vehivavy iray izay mifanaraka amin'ny tongotra ny habeny ny kiraro. Cinderella stepsisters niezaka ihany koa ny fitaratra slipper, fa ny tongony no tsy mitovy. Rehefa te hanandrana Cinderella, ny renikely nanakana ka voarara azy. Na izany aza, ny mpanjaka nanao hoe, "aoka miezaka!". Rehefa nanao ny fitaratra Cinderella slipper, nanana tongotra tonga lafatra ho an'ny kiraro. Ary ny mpanjaka dia nanaiky azy ary izy dia resy lahatra fa izy no vehivavy izay nandihy niaraka taminy teo am-dihy. Nanambady Cinderella ireo ka velona tamim-pifaliana.
Diposting oleh janji jono di 20.00